Wargeyska The Sun oo shaaca ka qaaday halka uu ku sii jeedo Edinson Cavani – Gool FM
Wargeyska The Sun oo shaaca ka qaaday halka uu ku sii jeedo Edinson Cavani
Haaruun December 13, 2021
(Manchester) 13 Dis 2021. Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska The Sun ee ka soo baxa Ingiriiska, wakiilka Edinson Cavani ee Walter Guglielmone, ayaa maamulka Manchester United kala hadlay suurtogalnimada uu Cavani ugu biiri karo kooxda reer Brazil ee Corinthians.
Kooxda reer Brazil ee Corinthians ayaa dooneysa inay lasoo saxiixato weeraryahanka qibrada leh ee reer Uruguay Edinson Cavani, kaasoo haatan ku dhibtoonaya kursiga keydka ee naadiga Manchester United.
Warbixintan ayaa lagu soo xigtay wareysi uu bixiyay wakiilka Edinson Cavani ee Walter Guglielmone, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa inaan sugno xoogaa si aan ugu laabano Koonfurta Ameerika, waan arki doonaa fursadaha jira.”
“Sida iska cad, haddii koox kasta oo ka socota Brazil ay leedahay mashruuc wanaagsan, mar walba waxaan awoodnaa inaan dhageysano, waxaa waajib igu ah inaan Cavani u helo dhammaan xulashooyinka.”
Si kastaba ha noqotee, magaca Edinson Cavani ayaa lala xiriiriyay kooxo dhowr ah oo ka dhisan Koonfurta Ameerika si uu ugu dhaqaaqo, waxaana kooxahaas ka mid ah Palmeiras oo Brazil ah iyo Boca Juniors oo Argantina ka dhisan, sidoo kale kooxaha Barcelona iyo Real Madrid.
Cavani ayaa u soo dhaqaaqay kooxda Man United bishii October 2020 markaas oo uu kaga soo biiray Paris Saint-Germain, waxaana uu qandaraas kula jiraa United ilaa 2022, isaga oo u ciyaaray 47 kulan Red Devils tartamada oo dhan, wuxuuna dhaliyay 18 gool halka sidoo kale uu ka caawiyay 6 gool saaxiibadiis.
DEG DEG: PSG vs Man United, Atlético Madrid vs Bayern Munich… (Isku aadka wareegga 16-ka UEFA Champions League oo la sameeyey)